အကောင်းဆုံးလက်ကား Cyperus Oil မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော rotundus မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ဟိုင်ရီ
လက္ကား Cyperus ရေနံမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော rotundus မရှိမဖြစ်သောဆီ
အတွင်းခံနှစ်ဆပလပ်စတစ်အိတ် ၂ ဖြင့် ၁.၂၅kg Fiber ဗုံ။ 50kg / 180kg net.3 ၏ GI ဗုံ။ ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်အဖြစ်။
အတွင်းခံနှစ်ဆပလပ်စတစ်အိတ်များနှင့်အတူ 1.25kg Fiber ဗုံ
2. ကီလိုဂရမ် / 180kg ပိုက်ကွန်၏ 2. GI ဗုံ။
ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်အဖြစ် 3. ။
အသုတ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်သိုက်ကိုဆပ်ရန်နမူနာ / ၇ ရက်အတွက် ၄၈ နာရီ
ပစ္စည်းအမည်: Herbal ထုတ်ယူမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအတွက် Cyperus ရေနံ rotundus မရှိမဖြစ်သောဆီ
-Cyperus Rotundus Linn ရေနံသည်အညိုရောင်အရည်၊ သစ်သားအနံ့ရှိသောအထူနှင့်ပယင်းရောင်မှဖြစ်သည်
-Cyperus Rotundus Linn ရေနံပါဝင်မှု - cyperus rotundus L.en, cyperus rotundus အရက်နှင့်အခြား cyperone
ဆပ်ပြာ၊ ရေမွှေး၊ အလှကုန်၊ အမွှေးနံ့သာ၊ အစားအစာနှင့်ဝိုင်အရသာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှန်ကန်သောဓာတ်ငွေ့နှင့်ရာသီလာခြင်း၊
အစာအိမ်ရောဂါများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသော Cyperus Rotundus Linn Oil
- Cyperus Rotundus Linn Oil သည်စိတ်ဓာတ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးစိတ်ကျရောဂါကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ menses များကိုထိန်းညှိပေးသည်။ သွေးလည်ပတ်မှုကိုအားပေးသည်။
ဂျင်းဆီ၊ လေးညှင်းပွင့်ရေ၊ ကြက်သွန်ဖြူဆီ၊ အာနီစီဆီ၊ သံပုရာဆီ၊ ချဉ်အစေ့ဆီ၊ ချိုမြိန်တဲ့ဗာဒံဆီ၊ ဂျုံစေ့ဆီညနေ၊ Primrose ဆီညနေခင်း၊ Borage ရေနံ၊ လက်ဖက်ခြောက်ဆီ၊ Sandalwood ဆီ၊ Oregano ဆီ၊ Carvacrol, Spearmint Oil, Ursolic Acid, Borneol, Aloe vera oil နှင့်ဂျင်ဆင်းဆီစသည်။
1. Customized အထုပ်, အသံအတိုးအကျယ်, လိုဂို
2.OEM / ODM အမှာစာများကိုကြိုဆိုပါသည်။
Jiang Xi Hai Rui သဘာဝစက်ရုံလီမိတက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် MSDS နှင့် COA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားသောသဘာဝအပင်လိုအပ်သောအဆီများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်အထူးပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အရည်အသွေးမြင့်မားသောရှင်သန်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု” ၏အကျဉ်းချုပ်ကိုဆက်လက်စွဲကိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်စတုရန်းမီတာ ၂၆၀၀၀ ကျယ် ၀ န်းပြီးရန်ပုံငွေ ၁၈ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးထိပ်တန်းစမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့်စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်စမ်းသပ်စက်များနှင့်အတူ။
ဒါ့အပြင်ငါတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတိရိစ္ဆာန်တွေအပေါ်မချွတ်ရပါဘူး။ ငါတို့က ၁၀၀% ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပဲ။ & သဘာဝမေတ္တာရှင်ကုမ္ပဏီ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်တာကမင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်
၁။ မေး။ မင်းကစက်ရုံလား၊ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။ မင်းရဲ့စက်ရုံဘယ်မှာလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM / ODM အရေပြားနှင့်မျက်နှာဖုံးများအတွက်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ အလှကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်တရုတ်နိုင်ငံ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီထုတ်လုပ်သည့် Jiangxiprovince တွင်တည်ရှိသည်။
ဖြေ - ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းများကိုသုတေသနပြုခြင်း၊ ဖောက်သည်တစ် ဦး စီအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းကိုအကြမ်းအားဖြင့်စံသတ်မှတ်ချက်သို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများ၊ အလှကုန်စမ်းသပ်ခြင်း၊
A: ငါတို့ရဲ့ကျောင်းအုပ်တစ်ယောက်နဲ့သာဆက်သွယ်ပါ။ အကောင်းဆုံးကိုတင်ပို့ခြင်းအထိသင်တို့အတွက်အရာရာတိုင်းကိုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်ကြမ်းတမ်းသောလိုအပ်ချက်များ, နမူနာ, ဒါမှမဟုတ်ရေးဆွဲရေးအပေါ်အခြေခံပြီးအလှကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော်လည်းအရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးတာ ၀ န်ယူတတ်သောအရောင်းအဖွဲ့များရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူသူများ၏ကြိုဆိုခြင်းနှင့်ချီးကျူးခြင်းခံရပြီးစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှု၊ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ဈေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းများကိုသင်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်သာယာဝပြောတဲ့အဘို့။ ငါတို့ကုမ္ပဏီသည်သင်၏ပညာရှိသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်သေချာသည်။
Private Label Top6သန့်စင်သောရနံ့ကုထုံးအဆီများ ...
အော်ဂဲနစ်အပျိုစင်မော်ရိုကို Cometic ဆံပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအာဂန်ဆီ
စင်ကြယ်သော OEM Hair Care Argan Oil
စက်ရုံစျေးနှုန်းတိုးပွားလာအစာစားချင်စိတ်ဆေးပညာ Grad ...